Ciidamo itoobiyaan ah oo ka baxay gudaha Somalia iyo soo dhaweyn loo sameeyay (Sawirro) | SMC
Home WARARKA MAANTA Ciidamo itoobiyaan ah oo ka baxay gudaha Somalia iyo soo dhaweyn loo...
Ciidamo itoobiyaan ah oo ka baxay gudaha Somalia iyo soo dhaweyn loo sameeyay (Sawirro)
Ciidamo badan oo Itoobiyaan ah qaarkoodna qeyb ka ahaayeen howlgalka nabad ilaalinta AMISOM ayaa dalkooda dib ugu laabtay kadib mudo ay ka howlgalayeen gudaha Soomaaliya gaar ahaan gobolada Baay iyo Bakool.
Ciidamada Itoobiyaan ah ee ka baxay Soomaaliya ayaa munaasabad soo dhaweyn ah loogu sameeyay degmada Doolow Adde ee ismaamulka Soomaalida, waxaana munaasabada ka qeyb galay saraakiil ciidan iyo masuuliyiin kala duwan.
Waxaa la sheegay in ciidamadan ay dhameesteen howlihii shaqo ee loo keenay gudaha Soomaaliya, waxaana saraakiisha Ciidamada Itoobiya ku amaaneen ciidankan dalkooda kusoo laabtay in shaqo adag soo qabteen.
Itoobiya waxaa gudaha Soomaaliya ka jooga ciidamo badan oon laheyn tiradooda saxda ah, ciidamada Itoobiyaanka ee jooga Soomaaliya ayaana isigu jira ciidamo ku howlala magaca AMISOM iyo ciidamo kale oon magacaasi huwaneyn.
Previous articleDhageyso:- Amaro laga soo saaray Amniga degmada Cabudwaaq
Next articleDhageyso:-Cumar Filish oo ku dhawaaqay kulan looga hadlayo Arrimaha G/Banaadir